Google Chrome ga-enye anyị ohere ibupụ okwuntughe n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
Google Chrome ga - enyere gị aka ibupụ okwuntughe
Eder Ferreño | | Noticias, Nkuzi
Google Chrome bụ ihe nchọgharị site na mma na ngwaọrụ gam akporo. Na mgbakwunye na ịbụ nke a kacha eji, ọ bụ ihe kacha mma ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe. Ọzọkwa, eziokwu ahụ sitere na Google na-eme ka ọ kachasị maka iji ya na ngwaọrụ gam akporo. Na mgbakwunye na hụ na ị na-emelite mgbe niile na ọhụrụ na nkwalite. Ugbu a, a mara ọkwa mbata nke mmelite na ihe nchọgharị ahụ.
una ụzọ ọhụrụ iji jikwaa okwuntughe na-abịa Google Chrome n'oge na-adịghị anya. Ma ọ dịkarịa ala, nke a bụ ihe koodu nke ihe nchọgharị na gam akporo na-egosi ebe achọpụtara ọrụ a. Kedu ihe ọ bụ?
Google na aru oru na ngwa ngwa mbuputa okwuntughe. Ọ bụ ọrụ ga-enye anyị ohere jikwaa okwuntughe anyị n'ụzọ dị mfe karị. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ ahụ niile na-eji okwuntughe dị iche iche na ibe weebụ ọ bụla.
Echiche bụ na ọ na-apụta mfe jikwaa okwuntughe anyị na-enwekwa ha n’aka anyị mgbe ọ bụla anyị chọrọ ha. Ọzọkwa, o yiri ka Google Chrome ga-ewepụta faịlị kedụ ebe anyị ga-ezukọ na okwuntughe niile nke ibe weebụ. Ihe nke bara oke uru, n’agbanyeghi na o nwere nsogbu ya. Ekpughebeghị ụdị faịlụ ọ ga - abụ, mana ịnwe okwuntughe anyị niile n'otu faịlụ dị egwu.
Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na mmadụ enwee ohere, nsonaazụ ya nwere ike ịnwụ. Mana, n'oge ahụ amabeghị etu ọrụ a ga-esi rụọ ọrụ Google Chrome. Yabụ, anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ kpughere ozi ndị ọzọ gbasara nke a tupu anyị ekpebie.
Onweghi ihe a ma maka mbata ya. Naanị na ọ ga-abata na nke mbụ beta nke Google Chrome na mgbe e mesịrị na nsụgharị anụ. Ọ dị ezigbo mma ịhụ na ihe nchọgharị ahụ na-aga n'ihu na-emeziwanye ọrụ ya iji mee ka ndụ anyị dịkwuo mfe. Anyị ga-ahụ otú ngwá ọrụ a si arụ ọrụ. Kedụ ihe ị chere maka ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Chrome ga - enyere gị aka ibupụ okwuntughe
[APK] Download ma wụnye ihe nyocha ihe LinageOS na gam akporo ọ bụla